IJingOS, usasazo olusekwe ku-Ubuntu kwaye lukhuthazwe yi-iPadOS | Ubunlog
Ukwaziswa kwe ulwabiwo olutsha lwe-Ubuntu esekwe kwi-Linux, ebizwa JingOS kunye nabaphuhlisi bathembisa ukubonelela ngenqanaba elifanayo lokusebenza njenge-iPadOS.
UJingOS wayenjalo zenziwe ngenjongo yokuphucula ukusebenza kunye nokusebenza kwamacwecwe ngokubanzi Iqela elingemva kwenkqubo entsha yokusebenza liphefumlelwe yi-iPadOS ukuba ibonelele ngesisombululo esilula, esinamandla nesilungileyo sokuguqula iipilisi kwiikhompyuter onokuzisebenzisa naphina.
I-Jingling yinkampani yaseTshayina emva kwale nkqubo intsha yokusebenza kunye nokusasazwa kweLinux ngokusekwe kwi-Ubuntu 20.04, KDE 5.75 kunye nePlasma Mobile 5.20 kuvavanywe iSurface Pro 6 kunye neHuawei Matebook pro 14 nge touch screen.
Enyanisweni, La maqonga mabini Iqela leJingOS ithengisa amava apheleleyo omsebenzisi njenge IJingOS yenzelwe ikakhulu ukuba ibe yinkqubo yokusebenza yeqonga lohlobo lwethebhulethi.
Inkqubo yokusebenza isengafakwa kwiikhompyuter ezininzi ze-x86, ekufuneka yona, nangona kunjalo, ixhotyiswe ngescreen sokuchukumisa.
ujongano Ilula kakhulu kwaye kulula ukuyisebenzisa, Ukongeza, ubeko lweempawu, ibha yemenyu, iifestile, kunye nezinto zolawulo ziyilelwe ukusebenzisana ngokukhawuleza.
Ngokubonelela ngenkxaso yekhibhodi kunye nemouse, IJingOS nayo Kukusasazwa ngokupheleleyo kweLinux. Zimbini iindlela ezahlukeneyo zokuchukumisa kunye nedesktop, kunye nezicelo ezininzi ezenzelwe iJingOS ezixhasa ezi ndlela ngokwendalo.
“IJingOS lusasazo olupheleleyo lweLinux esekwe ku-Ubuntu. Ungaqhuba usetyenziso lwe desktop yeLinux njengeKhowudi yeVenkile yeVenkile, iOfisi yeLibre, njl. IJingOS yinkqubo yokusebenza enobuhlobo eyenzelwe ngokukodwa iipilisi, ”utshilo uJingling. Ikhowudi yemithombo iya kuvulwa kungekudala.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba e-China, kukho umoya wokhuthazo lokusetyenziswa kwetekhnoloji yendawo. Ngapha koko, ngasekupheleni konyaka we-2019, abalawuli bakarhulumente bayalelwa ukuba baphelise zonke izixhobo eziyilwe zangaphandle kunye nesoftware kwisithuba seminyaka emithathu.
Ukuthetha ngokubanzi, intshukumo yenzelwe ukuba ikhululeke ekuxhomekekeni kubuchwephesha baseMelika njengoko imfazwe yorhwebo phakathi kwe-United States ne China ihlala isetafileni de sibone ukuba leliphi icala eliza kuthathwa ngumphathi omtsha waseMelika Amalinge ajikeleze ukusekwa kwenkqubo yokusebenza yelizwe aya esanda rhoqo.
Ngegama layo, unokucinga ukuba iJingOS yenye yeqela ukuba uyakhumbula ukuba eli gama linokunxulumana nokuthanda izwe, uhlobo olugqithisileyo lobuzwe apho iChina ithi ikhusela iimfuno zayo. Kwangelo xesha, izibeka njengomoyisi ngokufuna ukungqina ukuba inokukhuphela ngaphandle iinkqubo ezifanelekileyo zokusebenza.
Ziyefana nokujongana Umsebenzisi weJingOS nge-iPadOS ezo zenza ukuba umntu azibuze ngekamva lokusasazwa kweLinux.
Ngayiphi na imeko, Ayizukuqala ngqa iApple iqalise ukubonakaliswa. Kwixesha elidlulileyo, inkampani yaseCupertino yathatha i-Samsung yamsa enkundleni yamtyhola ngokukopisha ngokukhohlakeleyo ukubonakala kwe-iOS kumgca wayo wemveliso yeGlass Android.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba i-JingOS ikwenziwa ukuba i-smartphones kwaye iya kufumaneka ngaphambi kokuphela kwalo nyaka kwaye ingxelo yamacwecwe iya kukhutshwa ukuphela kukaJanuwari.
Kwakhona Kukhankanyiwe ukuba kucwangcisiwe ukwenza ithebhulethi ye-ARM Unikwe ikhibhodi enokutsalwa kunye nepadpad efana neKhibhodi yeMagic kwiPad Pro, eziza kuxhaswa ngemali ngephulo lokuqokelela imali yemali ekufuneka yenzekile kumcimbi weeveki ezimbalwa zokumiliselwa kwayo ehlotyeni.
Okwangoku abaphuhlisi bazimisele ukuxhasa ezinye izixhobo kungekudala, kubandakanya iipilisi ezisekwe kwi-ARM.
Gqibela kwabo banomdla wokwazi okungakumbi ngayo malunga nolwabiwo, unokujonga iinkcukacha Kule khonkco ilandelayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ulwabiwo olusekwe kubuntu » I-JingOS, usasazo olusekwe ku-Ubuntu kwaye lukhuthazwe yi-iPadOS
I-Flatpak 1.10 iza nefomathi entsha yokugcina, imiyalelo emitsha kunye nokunye